Smartwatches manomboka manavao ny interface OS OS vaovao | Androidsis
Tamin'ny faran'ny volana aogositra dia natolotr'i Google ny kinova vaovao an'ny Wear OS, kinova vaovao an'ny rafitra fiasa, izay nampiditra interface vaovao. Afaka mahita ny antsipiriany rehetra momba izany ianao eto. Miaraka amin'ity fanovana endrika ity dia nanantena ny hanome vahana ny rafitra fiasa ny orinasa, izay tsy nahavita ny boot hatramin'ny nanombohany tamin'ny fiandohan'ny taona.
Nohavaozina ny endriny ary mora ampiasaina izy io. Ka afaka manampy ny Wear OS handresy mpampiasa bebe kokoa eran'izao tontolo izao. Ary ny fiambenana voalohany dia manomboka mahazo ity interface vaovao an'ny rafitra miasa ity amin'ny fomba ofisialy.
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia efa nanomboka nanavao ny famataranandro voalohany izy ireo. Taorian'ny fampidirana an'ity kinova vaovao ity dia voamarina fa ny fiambenana rehetra, afa-tsy anarana vitsivitsy, hahazo ny fanavaozana izy ireo. Na dia tamin'ny androny aza tsy nisy daty nomena hanombohana azy.
Farany dia tonga ny andro, ary ny fiambenana voalohany dia manomboka manavao ity kinova Wear OS ity. Ka ho azon'izy ireo amin'ny fomba ofisialy ilay interface vaovao an'ny rafitra fiasan'ny watches. Fanavaozana izany dia tonga amin'ireo smartwatches ireo amin'ny endrika OTA. Ka tsy mila manao na inona na inona ny mpampiasa fa miandry fotsiny.
Tsy nisy daty voatondro manokana momba an'io fanombohana io arakaraka ny firenena. Ka toa ho zavatra hitranga mandritra ireo andro vitsivitsy ho avy io. Mety efa nahazo ity OTA avy amin'ny Wear OS ity ianao, na handray azy tsy ho ela.
Saingy tsara ny mahita fa manavao ireo famantaranandro. Ho hitantsika raha ekena sy omena lanja tsara ity kinova vaovao an'ny Wear OS ity nataon'ny mpampiasa. Mandritra izany fotoana izany dia mbola miandry ny hahatongavan'ireo modely vaovao miaraka amin'ity rafitra fiasa ity izahay, indrindra ny Pixel Watch an'ny Google, voalahatra ho an'ny 2019.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Ny interface Wear OS vaovao dia manomboka mahatratra ny famantaranandro voalohany